Mogadishu Journal » Axmed Madoobe oo la kulmay saraakiil ciidan
Axmed Madoobe oo la kulmay saraakiil ciidan
Mjournal :- Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta guriga martida ee Magaalada Kismaayo kulan gaar ah kula yeeshay Taliyaha Ciidamada Badda Maraykanka ee Africom Gen. David J. Furness oo uu wehelinayo Taliyaha Ciidamada AMISOM Soomaaliya Gen. Cusmaan Nuur Subagle ayadoo ay goob joog ahaayeen Saraakiil kale oo hawlgalka Maraykanka Soomaaliya qayb ka ah.
Kulankan ayaa diirada lagu saaray hawlgalka lagu xoraynayo Gobolka Jubada Dhexe iyo qaybo kamid ah Jubada hoose oo ay wali ku harsan yihiin Al-shabaab.
Dowlada Maraykanka ayaa ka tageeraysa Soomaaliya la dagaalanka Kooxaha Argagixisada ah oo dhibaato ku haya Bulshada Soomaaliyeed hawlgalka AFRICOM wuxuu balan qaaday in uu Jubbaland kala shaqaynayo sidii Al-Shabaab looga xorayn lahaa Jubada Dhexe iyo qaybaha kale ee ay wali kaga harsan yihiin gobolka.
Madaxweynaha Jubbaland wuxuu Hawlgalka Africom uga mahad celiyay sida ay isugu dhabar jabinayaan tageerada ay siinayaan Soomaalida sidii ay dhulkooda nabad uga dhigan lahayeen.
Jubbaland ayuu Madaxweynahu sheegay in ay ka go’an tahay xoraynta dhulka ay wali shabaab gacanta ku hayaan sidaas darteedna loo baahan yahay kaalmo caalami ah.
Dadka reer Rwanda oo doorasho u dareeray maanta
Neymar oo ka qaalisan dhamaan Cayaartoyda u dheesha 13 kooxood oo Premier League
Duqeyn mar kale ka dhacday gobolka Mudug by Ahmed Cali - Wed Nov 21st 5:32:50
Mareykanka soo bandhigay tirada uu ku dilay duqeymo uu ka sameeyay Soomaaliya by Ahmed Cali - Tue Nov 20th 17:22:41